anode အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံအတွက်အကောင်းဆုံး Graphite Box | Ningxin
anode အမှုန့်များအတွက်ဖိုက် Box
ဖိုက် သတျတော (graphite boat) ကိုယ်နှိုက်သည်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအပူချိန် sintering ပုံသွင်းသောဒီဇိုင်းကိုအတူတကွရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်အပြီးသတ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်နိုင်သည်။ Graphite box ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော graphite ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းကို graphite box လို့ခေါ်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ graphite boat လို့ခေါ်တယ်။ ဂရပ်ဖိုက်သေတ္တာကိုအဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောလေဟာနယ်ခံမီးဖိုများ၊ သော induction furnaces၊ sintering furnaces, brazing furnaces, ion nitridation furnaces, tantalum niobium အရည်ပျော်မီးဖိုများ၊
1. အပူတည်ငြိမ်မှု: အပူနှင့်အအေးအခြေအနေများအတွက်, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာစေရန်အထူးကုသမှုများအတွက်။
၂။ ချေးခြင်းခံနိုင်ရည် - ယူနီဖောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဒီဂရီများအသုံးပြုမှုတိုက်စားခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေပါသည်။
3. သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်: မြင့်မားသောအပူထိတ်လန့်မှုကိုခံနိုင်စွမ်း, ဒါကြောင့်ဖြစ်စဉ်ကိုစိတ်ချနိုင်ပါတယ်။
4.Acid ခုခံနိုင်စွမ်း - အထူးပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ပစ္စည်း၏ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပြီးအက်ဆစ်ခုခံနိုင်မှုအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဖိုက်တာ၏သက်တမ်းကိုများစွာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
၅။ အပူစီးကူးမှုမြင့်မားခြင်း - ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပါဝင်မှုမြင့်မားစွာဖြင့်အပူစီးကူးမှုကောင်းမွန်စေပြီးဖျက်သိမ်းချိန်ကိုတိုစေပြီးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေသည်။
၆။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်း - ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်သည်။
၇။ အရည်အသွေးတည်ငြိမ်မှု - တသမတ်တည်းတည်ငြိမ်သောပုံသွင်းခြင်းနည်းပညာ၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည်ပစ္စည်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုအပြည့်အဝရရှိစေသည်။
၈။ အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာ၊ သည်းခံစိတ်နှင့်ပုံပန်းသဏ္customerာန်သည်ဖောက်သည်များ၏စံနှုန်းထက်ပိုသည်။
၉။ ဖောက်သည်များနှင့်သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သောပညာရှင်များနှင့်အတူသူတို့သည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။
၁။ graphite box ၏ကော်လံများသည်ဒေါင်လိုက်နှင့်တည်ငြိမ်ရမည်။ graphite box ၏ကော်လံများသည်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ယိမ်းယိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်မီးခံနိုင်သောကလစ်များဖြင့်ပံ့ပိုးထားရမည်။ အပြင်ဘက်အခြမ်းရှိ graphite box ကော်လံသည်မီးဖိုနံရံသို့မတိမ်းမယောင်ဖြစ်သော်လည်းမီးဖို၏အလယ်ဗဟိုသို့အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
၂။ မီးဖိုကိုဖြည့်ပြီးနောက်၊ မီးဖိုတံခါးကိုတံဆိပ်ခတ်ပါ။ မီးဖိုတံခါးကိုအတွင်းနှင့်အပြင်အလွှာတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်အုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်သင့်သည်။ အတွင်းပိုင်းအလွှာကိုမီးဖိုနံရံ၏အတွင်းပိုင်းနံရံနှင့်အတူသုတ်လိမ်းသင့်သည်။ အပြင်ဘက်အလွှာကိုမီးဖိုနံရံ၏အပြင်ဘက်နံရံနှင့်အတူသုတ်လိမ်းသင့်သည်။ အလွှာတစ်ခုစီကိုဆေးသုတ်သင့်သည်။ မီးရွှံ့စေး။ မီးဖိုတံခါးကိုတည်ဆောက်သည့်အခါမီးကြည့်ရှုသည့်အပေါက်ကိုထားခဲ့ပါ။ မီးဖိုချောင်ထားသည့်နေရာတိုင်းတွင်မီးဖိုစောင့်တပ်ထားသည့်နေရာတိုင်းကိုတပ်ဆင်ထားသင့်သည်၊ ရုတ်တရက်မြင့်မားခြင်း၊ အငယ်၊ အငယ်စားများကိုရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။
၃။ graphite box ကော်လံ၏အမြင့် - ၎င်းကိုမီးဖို၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မီးဖိုရှိအစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုး၏အပူချိန်မြင့်တက်မှုအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည့်အနီးရှိ graphite box ကော်လံသည်မြင့်တက်သောမီးလျှံ၏ခုခံမှုကိုလျှော့ချရန်အနိမ့်ဖြစ်သင့်သည်။ အလယ်ပိုင်းရှိ graphite box ကော်လံသည်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်းမီးဖို၏ထိပ်နှင့်မီးတောက်များမြင့်တက်လာသည့်နေရာတွင်ဤနေရာတွင်ဆုံနိုင်ရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိသင့်သည်။ ထို့နောက်သူတို့ကိုမီးစုပ်သောတွင်းရှိမီးဘေးလမ်းကြောင်းများသို့ပြန်လည်ဖြန့်ဝေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုအသေးစိတ် - အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်အလုပ်လုပ်ရက် ၁၅ မှ ၃၀ ရက်အတွင်း။
ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း - ရှန်ဟိုင်းသို့မဟုတ်အခြားတရုတ်ပြည်မကြီးဆိပ်ကမ်း။
နောက်တစ်ခု: ဂိုက်ဖိုက် Lithium သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ
Graphite အအေး Box ကို
ဖိုက်မှို Box ကို
Llithium ဘက်ထရီ Graphite Box ကို
ဂိုက်ဖိုက် Lithium သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ
ဖိုက်အပိုပစ္စည်းများ, Semi-Circular Graphite လှေ, ဖိုက်ချပ်, ဂရစ်ဖိုက်ရင်ပြင်အသည်းကွဲခြင်း, ရင်ပြင်ဖိုက်လှေ, Carbon Graphite ကွန်တိန်နာ,